4Rest: H1 - I-Airbnb
Ikamelo e-indlwana ibungazwe ngu-Raju
Ukushaywa wumoya okuqabulayo ekuphileni kwedolobha okumatasa uye ezigodini zezintaba ezinhle kakhulu kanye nohlaza oluhlaza okotshani - i-4Rest iyindawo ekahle kakhulu yokuba kuyo. Ime phakathi nohla lwezintaba, indawo enokuthula engcolile, lapho uvuka khona ukubizwa kwamapikoko nezinye izinyoni ukuze unikeze usuku lwakho isiqalo esiphithizelayo. Ngesikhathi se-monsoons, umsindo ozwakalayo wamanzi aphumayo ukukhulula kunoma yikuphi ukucindezeleka ofuna ukukubalekela. Siyakwamukela ku-4Rest ekuvakasheni okuvuselelayo nabathandekayo bakho.
I-4Rest H1 yikamelo elinendlu yokugezela enamakamelo angasese endlini eyi-1-acre. Kukhona i-patio evamile noma i-verandah ngaphandle kwekamelo, lapho ungahlala khona futhi ujabulele indawo yokuphumula. Le ndlu iphinde ibe nezihlahla zezihlahla ezihlukahlukene zendawo njenge-hirad, i-bokar, ama-pala, ama-jambul njll. Ngaphandle kwezihlahla zomdabu, siye satshala nezinye izihlahla ezihlukahlukene ezimbali nezinhlobonhlobo.
Ikhishi elivamile lapho ukulungiselelwa kokudla kwenziwa khona ku- ‘Chula' – indawo yokupheka yendabuko kanye nendawo yokuhlala ehlukile yomnakekeli nayo ikhona lapho. Ukudla kungalungiselelwa futhi kunikezwe, ngokusondelana kwangaphambilini, noma uma ukhetha ukupheka ngokwakho, ikhishi elivamile linezinto zokudlela nemikhumbi ongayisebenzisa.
Ukudla kungatholakala endaweni yokudlela evulekile noma ngaphakathi kwamagumbi ngokwendlela oyikhethayo. Uma uthanda, ungaletha izithako (imifino njll.) ezingasetshenziselwa ukulungiselela ukudla okuthandayo. I-barbeque grill encane iyatholakala futhi kumaseshini e-barbeque yangaphandle.
Ikamelo lingakwazi ukuhlalisa abantu abangu-2 ngokunethezeka (abangu-2 ngaphezulu abanomatilasi owengeziwe phansi futhi ngemininingwane yangaphambilini inganikezwa ngaphandle kwenkokhiso eyengeziwe). Amashidi ombhede, imicamelo nezingubo zokulala zizohlinzekwa ekamelweni.
Ukuhamba ngezinyawo nokuhamba ngezinyawo kungahlelelwa izivakashi ezindaweni ezizungezile. Izindawo ezizungezile zihlinzeka ngamathuba amahle okuhambahamba.
Eduze neThempeli le-Waghjai eliyithempeli elivulekile phakathi nehlathi. Imizana eseduze kakhulu yi-Nandivali ne-Shiravli. Izitolo eziseduze kakhulu namasevisi akude ngo-9kms. Ihlathi eliminyene elizungeze indawo ngezinhlobonhlobo zezinyoni nezilwane.